थप चार शाखा विस्तार गर्दै सहकारी बैंक | Nepal's No.1 Co-operative News Portal
Home सहकारी खबर [Coop News] थप चार शाखा विस्तार गर्दै सहकारी बैंक
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पाँचथर, धनकुटा, महोत्तरी र सर्लाहीमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । उक्त स्थानमा शाखा स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती प्राप्त गरिसकेको बैंकका अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
बैंकले पाँचथर, धनकुटा, महोत्तरी, सर्लाही, चितवन र नवलपरासी जिल्लामा गरी ६ वटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न माग गरिएकोमा उक्त चार स्थानमा स्वीकृती पाएको हो ।
बैंकले आ.व. २०७१/०७२ मा ३४ वटा शाखाबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो भने आ.व. २०७२/०७३ मा ३ वटा शाखा थप गरी ३७ शाखा कार्यालयबाट सेवा तथा कारोबार गर्दै आएको छ ।
स्वीकृत हुन बाँकी शाखाका लागि थप पहल भईरहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए । स्वीकृत पाएको चार वटै स्थानमा आगामी तीन महिना भित्रै शाखा कार्यालय स्थापना हुने गरी तयारी कार्य अगाडि बढाइएको व्यहोरा पोखरेलले जानकारी दिए ।